Khasaaraha ka dhashay Gaadhi ku qarxay deegaanka Xamaas ee Jidka Berbera iyo Hargeysa dhexdood | Berberanews.com
Home WARARKA Khasaaraha ka dhashay Gaadhi ku qarxay deegaanka Xamaas ee Jidka Berbera iyo...
Khasaaraha ka dhashay Gaadhi ku qarxay deegaanka Xamaas ee Jidka Berbera iyo Hargeysa dhexdood
Xamaas(Berberanews):- Allaah caafimaad ha siiyee inta la xaqiijiyey laba qof, ayaa ku dhaawacmay shil Gaadhi oo shalay gelinkii dambe ka dhacay deegaanka Xamaas ee gobolka Saax, Tuuladaas oo ku taalla waddada u dhaxaysa magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa una dhaw dhinaca Berbera.
Baabuurka shilka galay oo sida la sheegay ahaa Land-cruiser nooca Layla-calawi loo yaqaanno, ayaa lagu soo warramayaa inuu qarxay oo uu gubtay markii ay isku gaadhi nooca xamuulka ah oo ay jidka isku dhaafayeen oo dhinaca ku dhuftay. Waxaanu warku intaa ku daray in isku-dhacaa labada Baabuur ay sababtay in gaadhiga Langaruusalka ah oo xawaare sare ku socday uu waddada ka baxo, isla markaana uu sameeyey qarax xooggan oo nawaaxiga waddada laga maqlayey sida la sheegay.
Gaadhiga ayaa la sheegay inuu ku sii socday magaalada Berbera, waxaana saarnaa afar qof, afartaas ruux oo lab aka mid ah oo gabdho ahaa uu dhaawac soo gaadhay sida laga soo xigtay dadka deegaanka, kuwaasoo la sheegay marka loo eego sida uu shilku u dhacay iyo qaraxa uu gaadhiga ay saarnaayeen sameeyey inay sahlan yihiin.
Previous articleBaashe Cawil Ooo Madaxweynaha Xamar ka qaatay warqad u fasaxaysa Inuu Magaca dawlada Somalia kula macaamili karo Shirkadaha ganacsiga ee Ajnabiga ah
Next articleDiyaarado dagaal oo warqado digniin ah ku daadiyey degmada Baraawe